Ahoana ny fomba ahazoana ny backlinks PR9 dofollow ao anatin'ny fotoana fohy?
Mba hahatonga ny raharaham-barotra hitanao amin'ny Google, mila mametraka ny voalohany ianao na farafaharatsiny amin'ny pejy faharoa amin'ny valin'ny fikarohana. Sarotra ny manosika ny vohikala ho amin'ny TOP OF Google SERP satria ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny tsena rehetra dia ambony. Hevitra roa manan-danja izay afaka mampivelatra ny orinasanao an-tserasera dia ny fampivoarana ny môtô sy ny dokam-barotra an-tserasera. Raha toa ka mandoa vola amin'ny dokam-barotra sasany ny fandoavam-bola dia mety ho azo atao amin'ny fandaniam-bola kely fotsiny. Na dia izany aza dia ilaina ny manamarika fa mila mahafantatra ireo endrika sy hevitra rehetra ny fanatsarana, ary koa ny fandrika sy ny tricks mba hamoronana fanentanana miorina amin'ny fanatsarana. Soa ihany, be dia be ny blaogy SEO tahaka ity iray ity, izay natao manokana mba hampitombo ny fanatrehanao ara-tsosialy - диван большой угловой.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho amin'ny lohahevitry ny fanorenana backlinks PRF dofollow. Hianatra lesona goavana momba ny raharaham-barotra misy anao ianao sy ireo loharanom-baovaon'ny lohamilina sy sehatra sosialy azonao ampiasaina hanamboarana rindran-kirakana tena manan-danja sy kalitaon'ny fidirana amin'ny tranokalanao.
Nahoana ianao no mila manangana backlinks dofollow amin'ny loharanon'ny tranonkala PR9?
Ireo tambajotra sosialy malala tahaka ny Facebook, Twitter, ary ny LinkedIn dia manana pejy PageRank avo izay tena tsara ho an'ny lisitra SEO anao. Ireo sehatra ireo no toerana tsara indrindra tokony hitenenanao. Ny famoronana backlinks amin'ny blôginao avy amin'ny loharanom-baovao PR9 dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toerana misy anao eo amin'ny sehatra Google. Izany no antony maha-te-hampiasa ny laharana avo lenta ho tombontsoanao amin'ny fijerena ny blôginao avy amin'izy ireo. Raha vita tsara ny zava-drehetra, dia hahazo fahefana bebe kokoa amin'ny milina fikarohana sy ny laharana ambony ianao.
Misy karazana backlinks roa azo azonao avy amin'ny tranokala avo lenta - dofollow sy nofollow. Ny backlinks Dofollow dia manana ny lanjany amin'ny tranokalanao rehefa mandefa saka fifandraisana izy ireo. Ny fitaovan'ny fikarohana dia manamarika ireo famantarana avy amin'ny loharanom-pahefana amin'ny alàlan'ny backlinks ary manome toerana ambony kokoa ny tranokalanao. Ny rohy miaraka amin'ny "nofollow" tag dia tsy voamarik'ireo botsin-doka ary mitondra ny lanjan'ny zero amin'ny fikajiana ny tranonkala. Amin'ny HTML, dofollow no fango fanalahidy ho an'ny rohy. Tsy mitaky na inona na inona manokana amin'ny tranokalan'ny tranonkala. Ny mifanohitra amin'izany aza, mila rakitra manokana ny nofollow backlinks mampiseho fa tsy tokony hoheverina ho laharana ny rohy.
Ahoana no hahazoam-peo PRF dofollow?
Ny fomba mora indrindra hamoronana rindrankajy PR dia ny fananganana fanamarihana na famoronana pejin'ny profil. Saingy aloha, mila manao fikarohana ianao ary jereo ny antontan'isa momba ny loharanon-tranonkala mifandraika amin'ny niche ary diniho ny karazana fifamoivoizana entin'izy ireo mankany amin'ny tranokalanao.
Andeha hojerentsika ny iray amin'ireo tambajotra sosialy avo indrindra amin'ny PR izay hitondra ny sira mifandraika amin'ny toeram-piarovana.
Mila mamorona pejy fandraharahanao amin'ny Facebook ianao, ary mankanesa ao amin'ny "Add Static HTML to page" ary hamela ny adiresy ofisialinao eto.Dia mila mahita bokotra "Manova" ianao ary esory ny rakitra, ny index. HTML. Ao amin'ity fizarana ity dia mila ampidirinao amin'ny rindrin'ny tranonkala amin'ny endrika manaraka ianao: Ny anaranao Blog . Mba hamaranana ny dingan'ny famokarana rakitra dofollow ao amin'ny Facebook, mila mametaka ny bokotra "Save and Publish" ianao.
Ny fanorenana backlinks dofollow ao amin'ny LinkedIn dia mitovy amin'ny ao amin'ny Facebook.Mila mamorona kaonty momba ny raharaham-barotra ianao ary ao amin'ny fizarana "Information personnel" dia ahafahanao miverina foana ny dofollow backlink. Ireo rohy hafa azonao atao amin'ny sehatra dia nofolo.